रिपोर्टर्स नेपाल-१ « रिपोर्टर्स नेपाल
पत्रपत्रिका अन्तरवार्ता बिबिध विचार समाज राशिफल अपराध
Author: रिपोर्टर्स नेपाल-१
काठमाडौं १७ जेठ । राष्ट्रिय सभा गृहस्थित सिटी हल रङ्गीचङ्गी साजसज्जाले भरिएको छ । आज बुधबार ११ बजे काठमाडौं महानगरले विद्यासुन्दर शाक्य मेयर र हरिप्रभा खडगी
राजपाले गर्यो चुनावको अर्को मिति प्रस्ताव
काठमाडौं १६ जेठ । सरकारले दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन ९ असारमा गर्ने निर्णय गरेसँगै राजपाले नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको छ । राजपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर पाँचदिन पछि असार १३
कांग्रेसले बोलायो सर्वदलीय बैठक
काठमाडौं १६ जेठ । सरकारको नेतृत्वका लागि नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिएको छ । सहमतिको सरकार गठनका लागि आज संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले
निर्वाचन आयोगको टोलीले बयान लिन थाल्यो
काठमाडौं १६ जेठ । निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना कार्य जारी रहँदा केही व्यक्तिले मतपत्र च्यातेको विषयमा छानबिन गर्न तीन सदस्यीय अनुगमन टोली
यी हुन् कांग्रेसका सम्भावित नयाँ मन्त्रीहरू
काठमाडौं १६ जेठ । पछिल्लो छ महिना यताको राजनीतिक विकसित घटनाक्रममा गलत निर्णय र पक्ष लिएकै कारण सर्वाधिक आलोचना खेपिरहेका कांग्रेस सभापति देउवाले व्यवस्थापिका संसदको सवैभन्दा ठूलो दल नेपालीको गौरवमय
काठमाडौं १६ जेठ । सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेको आदेश रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’ हाल्ने भएको खबर आजको अन्नपूर्ण
तलब नबढेपछि कर्मचारी निराश : बढाउने आश्वासन
काठमाडौं १६ जेठ । याँ बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता केही वृद्धि हुने आशा बोकेर बसेका कर्मचारी बजेट भाषणपछि हिस्स परेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय निकै चुनौतीपूर्ण भइरहेको अवस्थामा
एमालेले तालमेल नगर्ने निर्णय, किन ?
काठमाडौं १६ जेठ । एमालेले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा केन्द्रीय स्तरबाट कुनै पार्टीसँग पनि तालमेल नगर्ने भएको छ । पहिलो चरणको तालमेलले प्रभावकारी परिणाम दिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले यस्तो निर्णय
काठमाडौं १६ जेठ । दुई पांग्रेस सवारीमा भन्सार, अन्त शुल्क भ्याटलगायत गरी करिब ८० प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ। सरकारले चालु आवको बजेटमा सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार दस्तुर र
काठमाडौं १६ जेठ । खासै नयाँ कार्यक्रम नभए पनि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि सरकारले निकै ठूलो आकारको बजेट पेस गरेको छ । स्थानीय तहलाई संविधानको मर्मअनुसार उल्लेख्य रकम दिनै
काठमाडौं १६ जेठ । मतगणना स्थगित गरेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत निर्वाचन आयोगले दिने निर्देशन कुरेर बसेका छन् ।चितवनका दलहरुले मतगणना सुरु गर्न र वडा नम्बर १९ मा पुन: निर्वाचन गराउन
जसले आफैंलाई भोट हालेनन….
काठमाडौं १६ जेठ । स्थानीय निर्वाचनमा महानगरपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख पद दाबी गर्दै उम्मेदवारी दिएका कतिपयले आफूलाई पनि भोट नदिएको पाइएको छ ।वैशाख ३१ मा भएको निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन
काठमाडौं, २८ असोज । मेघा घिमिरेको सुन्दरताको तारिफ हुन्थ्यो । उनलाई मन नपराउने कोही हुन्नथियो
एनआरएनएको निर्वाचनमा उम्मेदवारी शुल्क १० लाख
काठमाडौं, २८ असोज । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को निर्वाचनमा सम्भवतः नेपालकै सबभन्दा बढी उम्मेद्वारी
काठमाडौं, २८ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डलमा व्यापक हेरफेर गर्ने भएका छन् ।